Etu ị ga - esi jiri data intaneti zụta ihe gị na 2019 | Martech Zone
Etu ị ga - esi jiri data intaneti zụta ihe na azụmaahịa gị na 2019
Friday, February 1, 2019 Sọnde, Febụwarị 3, 2019 Jilian Woods
Ọ dị ka ihe ịtụnanya na, site na 2019, ọtụtụ ụlọ ọrụ anaghị eji ya ebumnuche data iji mee ka ahịa na ahịa ha pụta. Eziokwu ahụ dị ole na ole na-egwu ala miri emi iji kpughee ụzọ kachasị mma ga-eduga gị na ụlọ ọrụ gị na uru ị kpebiri.
Taa, anyị ga-achọ ileba anya n'ọtụtụ akụkụ nke ebumnuche data na ihe o nwere ike ime maka ire ahia na ịre ahia. Anyị ga-enyocha ihe ndị a niile:
Kedu ihe bụ data Intentation na otu esi esite na ya
Olee otu ebumnuche data si arụ ọrụ
Ndọtị na mmekorita n'etiti ahịa na ahịa
Usoro ntinye ego
Gịnị Bụ Ebumnobi Data?
Isi ihe oyiyi: https://www.slideshare.net/infer/what-is-intent-data
N'okwu kachasị mfe, data ebumnuche na-egosi mgbe atụmanya akọwapụtara na-egosipụta omume ịntanetị na-egosi ebumnuche ịzụta. Ọ na-egosipụta n'ụzọ abụọ dị iche: data dị n'ime na data mpụga.
Ihe omuma abuo abuo nke ihe omuma nke di n'ime bu
Contactdị kọntaktị gị na ebe nrụọrụ weebụ gị: Onye na-akpọtụrụ na-ekwupụta ebumnuche site na ịmatakwu banyere ụlọ ọrụ, ọrụ ya, wdg.
Data ahịa mpaghara: Data anakọtara site na ndị ahịa mpaghara site na CRM ma ọ bụ usoro ntanetị ndị ọzọ bara ezigbo uru mgbe ị na-anwa ịghọta ebumnuche. Ndị otu ahịa na-eji data ahụ etinye uche na ndị na-eduga ndị na-eru nso ịme mkpebi ịzụta.
A na-achịkọta data ebumnuche ndị dị na mpụga site na ndị na-eweta ndị ọzọ ma na-eji nnukwu data iji chịkọta ozi dị nkenke. A na-anakọta ya site na kuki ndị ọzọ ma gwọọ ya na ọkwa IP. Data a bụ ngwaahịa nke ọtụtụ nde nleta na peeji ndị akọwapụtara na ọtụtụ narị puku weebụsaịtị.
Kinddị data a na-enye nkọwa doro anya, dị nkenke banyere ọnụọgụ ọnụọgụ na-enweghị njedebe. Lee ihe atụ ole na ole:
Ọnụọgụgụ nke ugboro otu akwụkwọ, faịlụ, ma ọ bụ ihe onwunwe dijitalụ na-ebudata
Ugboro ole a na-ele vidio
Olee otú ọtụtụ ndị mmadụ pịrị site mgbe na-agụ oku na-aga ime na a ọdịda page
Ọnụọgụ ọchụchọ ọchụchọ
Olee otú Intent Data Sourced?
Isi ihe oyiyi: https://idio.ai/resources/article/what-is-intent-data/
Ebumnuche nke ndị na-ere ahịa na-anakọta data sitere na weebụsaịtị B2B na ndị na-ebipụta ọdịnaya, ndị niile bụ akụkụ nke a data-nkekọrịta co-op. O doro anya, echiche nke ịmara saịtị saịtị mmadụ kpọtụrụ aha, okwu ha na-achọ, na ụdị nke ha na-eme nwere ike ịdị ntakịrị njọ na ihu ya, mana ọ bụ ihe ọ bụla mana. A chịkọtara data ahụ ma chekwaa maka ebumnuche a, wee kesaa (ma ọ bụ ree ya) ndị ọkachamara n'ahịa na azụmaahịa. Dịka ọmụmaatụ, ụlọ ọrụ na-ede ederede ga-enwe mmasị na ụlọ ọrụ (ma ọ bụ, ụfọdụ, ndị mmadụ) na-abanye okwu ọchụchọ dị ka “ọrụ edemede edemede”Ma ọ bụ" onye edemede agụmakwụkwọ "n'ime isi engines ọchụchọ na ndị na-eleta saịtị ndị na-ere ụdị ọrụ ndị a na ebumnuche ịzụta.
A na-achịkọta data ma kọọrọ kwa izu n'ọtụtụ ikpe. Site na nchịkọta nke ọtụtụ ijeri ọchụchọ, nleta saịtị, nbudata, pịa-ntụgharị, mgbanwe, na itinye aka, ndị na-ere ahịa nwere ike ịkọwapụta ọdịnaya ọdịnaya ma chọpụta nrịgo.
Vidio a si Bombora nke na-akọwa usoro ahụ nke ọma:
Olee Otú Intent Data si arụ ọrụ?
Isi ihe oyiyi: https://gzconsulting.org/2018/08/02/what-is-intent-data/
Ọtụtụ nde mmadụ gburugburu ụwa na-eji ịntanetị achọ ọtụtụ nde isiokwu na ụma tinye aka na ọdịnaya dị n'ịntanetị. Decide na-ekpebi nkọwa ndị kachasị mkpa ma bido nyochaa ntinye aka nke dabara na njirisi ahapụtara. Ahịa ahụ na-enye intual contextual gụnyere, mana ọnweghị oke na:
Job aha nke ezigbo olile anya
Nha ụlọ ọrụ na ọnọdụ ya
Aha na URLs nke akaụntụ ndị ahịa dị ugbu a
Aha na URLs nke akaụntụ ezubere iche
Aha na URLs nke ndị asọmpi ziri ezi
URL maka ụlọ ọrụ na-emetụta ihe na ihe omume
Njikwa mmekọrịta nke ndị ọrụ ụlọ ọrụ na ndị isi echiche
Okwu ọchụchọ dị mfe ma dị mgbagwoju anya metụtara ngwaahịa, ọrụ, nsogbu / isi mgbu, na nsonaazụ / chọrọ
A na-ewu ihe niile dị n'elu na algọridim na-edebe ma na-edeba ihe omume dị mkpa (ndị na-egosi ntinye aka pụrụ iche n'etiti ọtụtụ nde ọchụchọ na ntinye aka na-eme kwa ụbọchị). Ihe anakọtara data edepụtara nkọwa nkọwa zuru ezu gụnyere aha mbụ na aha ikpeazụ, nọmba ekwentị, adreesị ozi-e, aha ụlọ ọrụ, aha aha, ọnọdụ, ụlọ ọrụ, na ogo ụlọ ọrụ. Ọ na-egosiputa data gbara gburugburu na-egosipụta omume ha mere.
Ihe nlere nke omume emere gunyere nyocha ndi mmadu, ntinye aka nke ndi asọmpi, ntinye aka nke ulo oru, na ajuju ndi ozo banyere ihe omume ndi isi. Ihe data ahu mebiri omume site na udiri na akpalite. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ na-egosi ọ bụghị naanị ihe atụmanya ma ọ bụ onye ahịa mere, kama ya mere obu ya mere ya.
Ọ ga-ekwe omume ịkọ data nke na-achọpụta ndị ahịa ugbu a, akaụntụ lekwasịrị anya, ma megharịa usoro nke ebumnuche gosipụtara. Ihe ndị a niile nwere ndepụta nke ezigbo ndị mmadụ na-eme ihe iji mụtakwuo banyere ụdị ngwaahịa na ọrụ ị na-ere.
Ebumnuche data dị ka Ngwakọta na Ngwakọta Ọrụ
Ire ahia na ire ahịa enweela ụdị ịhụnanya na ịkpọasị. Ndi otu ahia choro ndi ndu ruru eru karia ndi di njikere izu ahia. Ndi otu ahia choro ichoputa oge ha, na etinye ha aka, ma zulite ha rue mgbe ha ruru ịdị njikere.
Ihe ndị a niile na-eweta nsonaazụ na ebumnuche data na-erite uru ma ahịa yana azụmaahịa dị mkpa. Ọ na - enye ngwa ọrụ na - ejikọ ọnụ ọnụ nke na - ejikọ ahịa na ire ahịa ozugbo, na - akwalite mmekorita, ịkọwa data yana atụmatụ atụmatụ dị mma maka ụdị kọntaktị niile. Lee ụfọdụ ihe atụ dị iche iche banyere otu esi eji ihe eji eme ihe emekọ ihe:
Nchọpụta nke ahịa ndị ọzọ na-eduga
Mbelata nke ọkụ na ịkwalite iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa
Ọma mmekọrịta na lekwasịrị akaụntụ
Ntinye mbido maka njirimara akara na ntinye uru
Relevantchọpụta ihe ndị dị mkpa
Ihe nke ọ bụla dị n'elu nwere mmasị na ahịa na ire ere. Ihe ịga nke ọma n'ime ha niile na-eme ka ụlọ ọrụ ahụ gaa n'ihu ma na-enye ohere maka ịmekọrịta, mmekọrịta dị mkpa n'etiti otu.
Ihe omimi: Uru Mpi
Itinye echiche ebumnuche nwere ọtụtụ elele. Otu ihe kachasị mkpa bụ ikike ya iji nyere ndị na-ere ahịa na azụmaahịa zubere imirikiti ndị na-azụ ahịa n'ofe nzukọ niile. Otu ụlọ ọrụ nwere ike, ma na-emekarị, nwere ihe karịrị naanị otu ahịa a chọrọ ma ọ bụ mmadụ n'okpuru otu ụlọ. Ihe dị otu onye isi ma ọ bụ onye ndu mkpa nwere ike ịbụ - ọ na - adịkarị iche na nke ọzọ.
Ebumnuche ebumnuche na-enyere ndị ahịa aka ịhazi ọdịnaya maka onye ọ bụla tinyere aka na usoro ịzụta. Site na otu narị otu narị otu na-eji njirisi yiri nke ahụ na ọchụchọ weebụ, data ebumnuche na-enyere aka dube okike nke ọdịnaya ezubere iche iji wulite mkpọsa ahịa siri ike ma gaa nke ọma.
Na-emezigharị Mmetụta Mmetụta
Inwe njikọ chiri anya n'etiti ebumnuche onye na-azụ ahịa na ọdịnaya mbụ na-enye ndị na-ere ahịa na ndị ọkachamara n'ịre ahịa nnukwu asọmpi. Iji bulie mkpokọta na ogo ebumnuche data dị mkpa na data anakọtara na-agakọ na ọtụtụ ọnọdụ igwe mmadụ, ala, na data firmographic. Enweghi mmekorita ndị ahụ, o siri ike (gụọ: nke na-agaghị ekwe omume) ịghọta nke ọma ụdị omume ụfọdụ dabara na profaịlụ ndị ahịa ụfọdụ.
Mgbe nghọta nke ebumnuche nke a kapịrị ọnụ onye zụrụ ya eguzobewo, ma ahịa na ahịa nọ n'ọnọdụ ka mma iji mepụta ọdịnaya dị mkpa, bara uru nke na-ebu ụzọ site na nzọụkwụ ọ bụla nke njem nke onye na-azụ ahịa.
Otu n'ime ụzọ kachasị mfe iji leverage ebumnuche dị irè bụ ịmalite ọdịnaya ọdịnaya blog, isiokwu weebụ, na ụdị ndị ọzọ edere ederede nke gosipụtara nghọta doro anya banyere ahịa gị. Ọdịnaya kwesịrị ịkọwa nsogbu na isi ihe mgbu yana ihe achọpụtara site na ebumnuche ebumnuche. Ime ihe niile a na - eme ka akara gị dị ka ikike ma na - ekwupụta ikike iji nyefee ọdịnaya nwere ọgụgụ isi, nke a tụkwasịrị obi, nke nwere ntụkwasị obi.
Ọ dịkwa mma ịkesa ọdịnaya nke mbụ n'ụzọ nke na-agbasawanye iru. Nke a gụnyere ịmepụta usoro ibipụta akwụkwọ na usoro njikọ gbasara ọdịnaya niile echere. Na nkenke, mepee ma bipụta ọdịnaya nke gosipụtara atụmatụ ebumnuche ma hụ na ọ hụrụ ụzọ ya n'ihu ndị na-ege ya ntị.
Usoro ndu ndu nke na-eji ihe eji eme ihe na-eme ihe na-eme ka ihe ọ bụla na-eme ka ọ dị mma maka ahịa ma ọ bụ ahịa ọ bụla. Ọ na - eme ka akara gị dị iche na ndị ọzọ na - asọmpi ma na - abawanye ọghọm nke mechara bụrụ onye isi ụlọ ọrụ.
Mee usoro ahia ahia zuru oke, nke na-adighi nma nke na egosiputa ebumnuche ebumnuche nke atumatu weputa n'oge oru nile nke ntaneti (nyocha, nleta saịtị, mmekorita nke ndi ozo, wdg). Nke a agaghị enyere aka n'ịme ndu ka mma, ọ ga-enwekwa mmetụta dị mma na ala gị. Ijikọta data ebumnuche ga-enyere aka mee ka mkpọsa ahịa n'ọdịnihu na-aga nke ọma, na-ekwe ka ndị otu ahịa gị lekwasị anya na akaụntụ ndị yikarịrị ịzụta.
Tags: ala ahia
Jilian Woods bụ onye nta akụkọ na-enweghị akwụkwọ yana onye edemede na-enye aka nwere ihe karịrị afọ abụọ nke ahụmịhe ederede. Dịka onye edemede, ọ na-ahụ ebumnuche ya n'ịmepụta na ịkekọrịta ọdịnaya dị mkpa na ndị dị njikere ịmụ ihe ọhụrụ. E wezụga ọrụ ụbọchị ya, ị nwere ike ịhụ Jilian ka ọ na-arụ ọrụ afọ ofufo ma ọ bụ na-eme yoga.
Etu esi ewepụta saịtị WordPress nke kachasị maka nchọta